'Red Red Redemption 2' nwere Serial Killer na Ha Thar Hills - Egwuregwu
Mbido Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ 'Red Red Redemption 2' nwere Serial Killer na Ha Thar Hills
'Red Red Redemption 2' nwere Serial Killer na Ha Thar Hills
by Trey Hilburn III November 28, 2018 1,499 echiche
Ọma ịgbaghara ọ bụrụ na gị onwe gị, ka na-mosese site ugwu, ndagwurugwu na swamps nke Red Dead mgbapụta 2, mgbe ahụ ịmara na enwere ọtụtụ ihe ịchọpụta n'ime ha. Nchọpụta ndị ahụ sitere na hysterical ruo na chi-aka nri chilling.
Otu n'ime ihe nchọta a batara n'oge na-abụghị Valentine. Achọpụtara m ọtụtụ udele na-apụ apụ, wee kpebie inyocha. Ahụrụ m otu ozu nke tụkwasịrị n'elu ngwongwo akwa ya na ngwa ya na eriri afọ ya. A kpọgidere isi ya n’osisi tụkọtara ọnụ tinye ya n’ọnụ. Mgbe m debanyechara aha m, achọpụtara m na ọ bụ otu mpempe eserese wee pụọ ịga ebe mgbago nke a.
Maka ndị maara nke ọma ịma egwuregwu ahụ, ị ​​maara na ụwa mepere emepe bụ nnukwu 'freakin'. Chọ ozu atọ bụ ihe na-eri ahụ na agịga zuru oke na ọnọdụ ahịhịa. Ọ nyeghị aka na ya, m na-emegide ile anya ọnọdụ ndị ahụ n'ịntanetị. Tainfọdụ ọnọdụ ịgba chaa chaa na-akwụghachi ụgwọ karị mgbe ị na-achọta ihe ọ bụla, ma ọ dịkarịa ala ọ bụ maka m.
Yabụ, mgbe m nyochachara ike m, eduru m gaa na ọnọdụ igbu ọchụ abụọ ọzọ dị egwu nke gosipụtara nke mbụ. Onye nke ọ bụla nwere ozu na-ewepụsị isi ya na isi ya na-ebu mpempe map.
Mgbe ejikọtara map ahụ na-eduga na okpuru mmiri nke jupụtara na iberibe ọtụtụ ndị ọdachi dakwasịrị. Arthur Morgan dara ogbenye na-achọ ụlọ okpuru ulo, ọ na-apụ apụ.
Mgbe Arthur tetara, ihe nzuzu, ihe nzuzu, Edmund Lowery Jr guzo n'elu Arthur na-akọwapụta echiche ya, yana ihe ọ zubere maka nwatakịrị na-adịghị mma.
Site na ngwa ngwa ngwa ngwa, Arthur nwere ike igbanwe tebụl ma gbuo ma ọ bụ hogtie Edmund.
Ọ bụ ihe dị jụụ n'akụkụ nke ahụ bụ nke mbụ na-atụ egwu gbasara nsen Ista na-agbasa RDR2.
Kedu ihe bụ sọsọ afọ ndị na-ajụ oyi ị sụrụ ngọngọ? Ka anyị mara na ihe!
Red Dead mgbapụta 2 dị ugbu a n'ebe niile.